Usoro Iwu Nchekwa Data -
Ụlọ ọrụ Company & Iwu Iwu Nchekwa Data
Na May 25, 2018, iwu iwu nzuzo ọhụụ ọhụrụ a na-akpọ Iwu Data Protection Protection (GDPR) na-arụ ọrụ na European Union (EU). GDPR gbasaa ikike nzuzo nke EU n'otu n'otu ma tinye ọhụụ ọhụrụ na òtù niile na-azụ ahịa, akara, ma ọ bụ na-ejikwa data onwe onye EU. Kedu otu nke a ga esi emetụta ụlọ ọrụ gị?
GDPR bụ iwu iwu nchekwa data zuru ezu (dị ka 25, 2018) si dị na EU nke na-ewusi nchebe nke data onwe onye na-eme ka mmepe nkà na ụzụ ngwa ngwa, ọnụ ọgụgụ ụwa na-arịwanye elu, na nchịkọta nke data onwe onye dị mgbagwoju anya. Ọ na-emelite ma dochie ihe nchedo nke iwu nchebe nke mba dị ugbu a na otu usoro nke iwu, na-etinye aka na nke ọ bụla nọ na EU.
Kedu ihe GDPR na-achịkwa?
GDPR na-achịkwa "nhazi" nke data maka ndị EU, nke gụnyere nchịkọta, nchekwa, mbufe, ma ọ bụ ojiji. Onye ọ bụla nzukọ nke na-eji data onwe onye nke EU n'otu n'otu bụ n'ime iwu, n'agbanyeghị ma nzukọ nwere ahụ nkịtị na EU. N'ụzọ dị oke mkpa, n'okpuru GDPR, echiche nke "data nkeonwe" dị oke obosara ma kpuchie ozi ọ bụla metụtara onye akpọrọ ma ọ bụ onye amata (a na-akpọ "isiokwu data").
Ndi GDPR choro data nke EU ka ha no na EU?
Mba, GDPR anaghị achọ data nke onwe onye EU na-anọ na EU, ma ọ bụ na ọ na-etinye ihe ọ bụla ọ bụla mmachibido na-enyefe data nkeonwe n'èzí EU.
CompanyHub GDPR dị njikere
Ndị na-ahazi na-aghọtawanye mkpa nchebe ozi-mana GDPR na-eme ka mmanya ahụ dị elu. Ọ na-achọ ka òtù ndị ahụ na-ewere usoro ịzụ na ụzụ kwesịrị ekwesị iji kpuchie data onwe onye site na ịnwụ ma ọ bụ ịnweta ohere ma ọ bụ nkwupụta. Anyị na-echebe akụrụngwa anyị & ọrụ data.
GDPR Na-eme Ka Ihe Njirimara Gbanwee
Wepụ ọdụ data
Nchebe Ntụpu Isiokwu
Nchekwa Ngwá Ngwa
A na-ewu Ụlọ ọrụ Company na nchekwa iji kpuchie data na ngwa gị. I nwekwara ike ime usoro nchedo onwe gi iji gosipụta usoro na mkpa nke nzukọ gị. Ikpuchi data gị bụ ọrụ jikọrọ gị na CompanyHub. Ụlọ ọrụ nchebe Ụlọ ọrụ na-enyere gị aka ịnye ndị ọrụ gị aka ịrụ ọrụ ha n'enweghị nsogbu na ịrụ ọrụ nke ọma. Atụmatụ nchedo dị iche iche dị n'okpuru:
Ụlọ ọrụ CompanyHub jiri Amazon EC2, RDS, S3 nke a kwupụtala GDPR Na-emezu site na Amazon tinyere Usoro Omume CISPE.
CompanyHub na-eji SSL ezoro ezo iji bufee data sitere n'aka ndị ọrụ na ọdụ data anyị. Izo ezo na-eji SHA256 algorithm maka izo ya ezo.
Onye ọ bụla ahịa na-enweta ihe nchekwa data dị iche iche na CompanyHub. Ya mere, o nweghị ihe enyemaka ma ọ bụ ihe gbasara omume nke enweghị nkwupụta data nke ọdụ data nke ndị ọrụ ndị ọzọ
Iji ikikere tebụl, ndị ọrụ nwere ike igbochi ịhụ, ịmepụta, emelite ma ọ bụ ihichapụ tebụl. Mpempe akwụkwọ na-enye gị ohere zoo mbadamba ndetu niile site na ndị ọrụ ụfọdụ ka ha ghara ịma ma ọ bụrụ na tebụl dị.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike ịchọ ka ndị ọrụ nwee ike ịbanye na tebụl, mana machibido ohere ha na mpaghara ndị ọ bụla na tebụl ahụ. Nchekwa ubi-ma ọ bụ ikike ikikere ubi - ma onye ọrụ nwere ike ịhụ, dezie, uru maka otu ubi na tebụl. Ha na-ahapụ gị ka ị chekwaa oghere ndị mara mma n'enweghị zoo tebụl niile site n'aka ndị ọrụ.
Tinyere tebụl na ubi, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchịkwa ndekọ ahụ n'onwe gị, Nchebe nchịkọta ederede na-enye gị ohere ịnye ndị ọrụ ịnweta ụfọdụ ederede okpokoro, mana ọ bụghị ndị ọzọ. Ihe ndekọ ọ bụla nwere onye ọrụ. Onye nwe ya nwere ohere zuru ezu na ndekọ ahụ. N'ọchịchị, ndị ọrụ dị elu n'ọchịchị na-enwekarị ohere ịnweta ndị ọrụ dị n'okpuru ha na ndị isi. Enwere ụzọ abụọ ị nwere ike ịdekọ nchekwa nchedo
Òtù Ịkekọrịta Ntọala: Nzọụkwụ mbụ na nchebe dị larịị bụ iji chọpụta ntọala nhazi ntọala. Site na ndabara, ihe niile edere na-ahụ maka ndị ọrụ niile na otu nzukọ. Anyị nwere ike iji ntọala nhazi nke nzukọ iji kpọchie data nye ndị nwe na ndị ọrụ. Mgbe emechara nke a, ị nwere ike inye ohere ndị ọzọ na ndekọ ndị ọzọ na ndị ọrụ ndị ọzọ site na iji ntọala nchebe ọzọ.
Ógbè Ochie: Ozugbo ị kọwapụtara ntọala mmemme nke nzukọ, Ị nwere ike iji ndị isi obodo na-ekerịta ohere ịnweta ndekọ. Ndị isi obodo na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta ndekọ ndị dabeere na njirimara dịka koodu zip, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ubi omenala nke dị mkpa maka azụmahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịmepụta ndị isi obodo ebe onye ọrụ nwere ọrụ "North America" ​​nwere ohere dị iche iche karịa ndị ọrụ na ọrụ "Canada" na "United States".
A na-agbakwụnye akụkọ ọ bụla na nchekwa. Enwere ike ịhapụ ndị ọrụ iji lee / dezie akụkọ ụfọdụ site na iji akuko. Enwere ike ịhapụ ha ma ọ bụ kweta ka ịlele / dezie akụkọ.
Ị nwere ike ịhọrọ mpaghara ụfọdụ na tebụl ọ bụla iji soro & nyochaa ndetu na mpaghara ndị ahụ. Ịgbanwe nke ọ bụla n'ime ubi ndị a na-agbakwụnye ọrụ arụghị ọrụ na tebụl ahụ.
Kwesịrị ichefu echefu
Usoro nhazi data
CompanyHub gbalịsiri ike nyere gị aka ịgbaso iwu nchebe na iwu nzuzo site na mmejuputa nke dị iche iche dịka ozi-e-ehichapụ na ntanetị. Anyị na-arịọ maka nkwenye n'ihu ntinye aha na wdg. Anyị na-echekwa nkwenye, oge nkwenye, ọnọdụ nke nkwenye maka ọrụ iwu. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ahịa anyị ịchekwa nkwenye nke ndị ọrụ ha, CompanyHub na-enye nhọrọ iji mepụta tebụl omenala iji chekwaa ubi nke nkwenye ndị ọrụ. Ihe ndekọ nkwenye ndị a nwere ike jikọta na ihe ndekọ na tebụl achọrọ.
Iji soro nchekwa data na iwu nzuzo, mgbe ụfọdụ, ndị ahịa kwesịrị ihichapụ data nkeonwe ha.
CompanyHub na-enyere aka ngwaọrụ zuru oke ka ihichapụ data gị. Ị nwere ike ịhọrọ ehichapụ ihicha ma debe data gị dị ka iwu nzuzo anyị ma ọ bụ ịnwere ike ihichapu data kpamkpam. I nwekwara ike ịhọrọ ime ihe mgbe ọ bụla ị na-ehichapụ ihe ndekọ. Ọ bụrụ na onye ahịa chọrọ ihichapụ akaụntụ ya dum, a na-enye nhọrọ ka onye ọrụ ahụ wee tinye koodu ntinye aka natara nke anatara ma hichapụ akaụntụ ya site na CompanyHub dị ka iwu anyị si dị.
Mgbe ọnọdụ chọrọ ka ị mee nke a, gbochie nhazi data nke ndị ahịa gị. Anyị na-enye nduzi inyere gị aka igbochi ụdị nhazi data. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike ịrụ ọrụ iji kwado iwu ndị dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị. Ị nwere ike mbupụ data site na CompanyHub na ị gaghị achọ ka a hazie ya.
Enwere nhọrọ dị iche iche maka data data. Ị nwere ike iji API, Wizard Bubata iji bubata data si CSV faịlụ na CompanyHub. Ị nwere ike ikwe ka ndị ahịa gị bubata data ha dị ka usoro iwu data dị iche iche. Enwere ike ịchọta data site na ụzọ dị iche iche dịka mbupụ mbupụ UI, akụkọ, API REST. Ụdị mbupụ ozi gụnyere JSON na CSV.
Ọzọkwa, anyị amụma nzuzo na-enye ozi gbasara anyị onwe anyị, data anyị na-anakọta, otu anyị si eji ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na support@companyhub.com.